अनलिमिटेड गिफ्ट भौचर पाउनुभयो भने तपाईंले किन्ने पहिलो प्राथमिकताका तीन चीज के-के हुन सक्छन् ? - केवल एक प्रश्न - प्रकाशितः आश्विन ३, २०७१ - साप्ताहिक
म त फस्टमा परफ्युम, सेकेन्डमा नेल पोलिस र थर्डमा लिपिस्टिक लिन्थें।
- शालु गौतम, मोडल
जीवनभर पुग्ने खाद्यान्न, बाबुहरूको शिक्षाको सम्पूर्ण फिस अनि दरबारमार्गमा महिनाको ५-६ लाख रुपैयाँ घरभाडा आउने घर किन्थें। भाडाबापत आएको पैसाले अनाथ बालबालिका तथा वृद्धवृद्धाहरूका लागि काम गर्थे। आफूलाई पनि थोरै राख्थें, त्यसपछि मज्जाले सुत्थें। आफूले थाहा पाएदेखि दौडिएको दौड्यै छु कम्तीमा आराम त गर्न पाउँथें।
- निर्मल शर्मा, कलाकार/निर्देशक
यो कलियुगमा अनलिमिटेड गिफ्ट भौचर पाउनु त असम्भव कुरा हो। कति हाँस्नु...यदि पाइहालिएछ भने सुरुमा सामाजिक कार्यका लागि ठूलो रकम डोनेसन गर्थे, जुन आजको नेपालका निम्ति एकदमै आवश्यक छ। दोस्रो नजिकका साथी सबैलाई वल्र्ड टुरमा लाने थिएँ, अनि तेस्रोमा के गर्थें भन्ने आफैंलाई पनि थाहा छैन।
- फुर्वा शेर्पा, निर्देशक
वाउ...... अनलिमिटेड गिफ्ट भौचर ? सुरुमा अस्ट्रेलियामा बीचफ्रन्ट डि्रम हाउस किन्थें, समुद्री किनारका ती आकर्षक घर अति नै महँगा छन्। त्यसपछि युरोप टुर जाने थिएँ, त्यस्तै लसभेगास पुगेर भनेजति सपिङ गर्थें।
- पुनम थपलिया, मोडल
मलाई गिफ्ट भौचर दिने त्यो कम्पनी नै किनिदिन्थें अनि त्यसपछि मात्र अरू कुरा सोच्ने थिएँ।
- राजेश घतानी, निर्माता
अनलिमिटेड त्यो पनि सित्तैमा पाउने भएपछि ५० प्रतिशत सामाजिक सेवाका निम्ति छुट्याउँथे। पहिलो गिफ्ट भौचर नै सामाजिक सेवामा समर्पित हुने थियो। दोस्रोमा आफ्ना लागि कार किन्थें अनि तेस्रोमा आफ्नै लागि घर पनि किन्थें।
सामसुङको लेटेस्ट स्मार्ट मोबाइल लिन्थे, राडो ब्रान्डको महँगो घडी अनि डक्टर मार्टिनको सबैभन्दा मूल्यवान् जुत्ता किन्थें।
- शंकर बीसी, निर्देशक
म मोबाइल, घडी र ब्यागहरू लिन्थें होला। सपिङमा यी तीन चिज मेरा फेबरेट हुन्।
- रीता केसी, गायिका
गिफ्ट भौचर पाउनेबित्तिकै म सुरुमा छोराका लागि चाहिनेजति डाइपर किन्छु, तुरुन्तै सकिन सक्ने चिजहरू किन्छु, अनि बचेको रकम डिपोजिट गर्छु।
- मिङ्मा शेर्पा, गायक